“Waxaa inaga go’an in hanaanka dib u eegista dastuurka uu waafaqo shareecada Islaamka..” (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
“Waxaa inaga go’an in hanaanka dib u eegista dastuurka uu waafaqo shareecada Islaamka..” (SAWIRO)
Wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan wadatashi ah la qaadatay culumada Soomaaliyeed oo ay kamid ahaayeen kuwo magac iyo maamuus ku leh bulshada dhexdeeda.
Uljeedka shirkaasi ayaa ahaa sidii loo dhageeysan lahaa taladda culumada ee ku saabasan ololaha hanaanka dib u eegista dastuurka.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka Mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay in iskaashi layeeshaan culumada.
“Waxaa inaga go’an in hanaanka dib u eegista dastuurka uu waafaqo shareecada Islaamka, sidaa darteed, waxa aan u baahannahay ra’yigiina inaga oo xiriir dhow idin la yeelan doonno” Ayuu yiri wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Dhinac kale, C/raxmaan Xoosh Jibriil oo ka hadlay sida dastuurka qabyo-qoraalka ah ee hada jira lagu sameeyay ayaa sheegay in 2012-ka ay jireen caqabado badan oo ka hor taagnaa in wadatashiyo badan la sameeyo.
“Annaga 2012kii markii dastuurka aan ka shaqeeyneynay waxaa la inagu dhaliilay in kulamo wadatashiyo ah oo badan aanan la qaban, runtii waxaa inaga hortaagnaa kooxaha nabaddiidka oo wadanka badankiis gacanta ku hayay, laakiin xilligaan waxa aan ballanqaadeynaa inaan wadatashiyo ballaaran sameeyno culumaduna ay helaan waqti badan oo ay uga qeyb-galaan geedi-socodka” Ayuu yiri wasiirka.
Ugu dambeyn, wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa dhamaan culumada Soomaaliyeed ka codsaday inay si dhow u la shaqeeyaan wasaaradda oo ay doorkooda aadka u muhiimka ah ka qaataan geedi-socodka dib u eegista dastuurka dalka.